घोडीघोडा लघुवित्त : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, ७ पुस २०७६)
कम्पनीले पूँजीवृद्धिका लागि २० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव पारितका लागि कम्पनीले आगामी पुस २६ गते साधारणसभा आयोजना गरेको छ । पुस ७ गतेदेखि २६ गतेसम्म बुक क्लोज रहेको छ । पुस ६ गतेसम्म शेयर किन्ने शेयरधनीले साधारणसभामा भाग लिन पाउनेछन् । चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनी रू. २४ लाख ८७ हजार नोक्सानीमा छ ।
खर्चमा वृद्धि भएपछि नोक्सानीमा गएको हो । चुक्तापूँजी रू. २ करोड ७६ लाख छ । प्रस्तावित २० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ करोड ३१ लाख पुग्नेछ । कम्पनीले सम्भावित जोखिमबापतको व्यवस्थामा रू. १० लाख ६७ हजार छुट्ट्याएको छ । जगेडा कोष रू. ४८ लाख ५६ हजार ऋणात्मक छ । आइतवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ५९५ कायम भएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. १६ ले घटेको हो ।
2019-12-23 - 170 view(s) - abhiyandaily